Ukudlulisa - I-Delta Engineering Belgium
Faka kungobo yomlando kusuka kusigaba "Ukudlulisa"
NgoLwesihlanu, 09 Novemba 2018 by UCristina Maria Sunea
(Ngokuzenzakalelayo) imihlahlandlela eseceleni evumayo
Isistimu yokulungisa izinkomba eziseceleni. Kunganciphisa kakhulu izikhathi zokushintshwa kwemigqa yokudlulisela! Izinhlobo ezahlukahlukene ezitholakalayo: ibhukwana - incwadi yezandla, ama-speedsets - ibhukwana ngesandla - nge-othomathikhi (i-servo elawulwa).
Ishicilelwe ku Ububanzi becala
Umakwe ngaphansi: okuzenzakalelayo, kudluliswa imigqa, Ukulungiswa, imihlahlandlela eseceleni, ngokuzenzakalelayo nezimo, ushintsho olusheshayo, inhlukano, amakhona, ngesandla, isethi yamabhodlela encike ebunjiwe, amathiphu wesandla, i-servo elawulwayo, ASG, switchover isikhathi sidlulisela
Isihambisi se-Chain - ububanzi obuyi-83mm
Sinohlu oluphelele lwama-chain conveyors atholakalayo.
Ishicilelwe ku chain
Isihambisi se-Chain - ububanzi obuyi-254mm
I-Side grip conveyor
Lolu hlangothi olugudluzayo lubeka phezulu amabhodlela aqamba amanga, lidlulisa amabhodlela ukusuka kwelinye eliyisa kwelinye, livimbela amabhodlela ukuthi adonswe ngalo,… Ukuhlolwa kwesisekelo njll. Kuyatholakala ngobude obuhlukahlukene, isivinini nezinhlelo zokushayela.
Umakwe ngaphansi: umhambisi, CSG, i-side grip conveyor, iqonde, amabhodlela aqamba amanga, ukudlulisa ibhodlela, ukuhlolwa kwesisekelo, ukuhlolwa kwekhamera, kudluliswa imigqa, kudlule, izinhlangothi eziseceleni, phakathi kwezidlulisi
NgoLwesibili, 14 Mashi 2017 by Ubunjiniyela beDelta
Lesi siphakamiso sebhodlela siphakamisa amabhodlela afike ezingeni eliphakeme emigqeni yokudlulisela ibhodlela. Lokhu kungaba ukudlulisela amabhodlela phezulu naphansi ngaphezulu kwe-alley, noma ukuwahambisa kwelinye izinga. Ngama-2 grip grip adlulisela ngobubanzi obuguqukayo.
Ishicilelwe ku I-Elevator
Umakwe ngaphansi: ilitha lamabhodlela, ukuphakamisa ibhodlela, DBL200, imigqa yokudlulisa ibhodlela, izinga eliphakeme, phansi okuhlukile, alley, izinga lokuphakama, ama-side grip conveyors, kuvikelwe, ukuphepha PLC, ukulungiswa ohlangothini
Le mpinda yepallet ivumela opharetha oyedwa ukuba enze iphallet ephelele yokuphakama (3100 mm), ngokufaka amaphallet amaphakethe amabili okuphakama. Yehlisa izindleko zokuhamba ngo-5 kuya ku-15%!
Ishicilelwe ku Ukuphathwa kwePallet
Umakwe ngaphansi: impinda yepallet, I-DP050, opharetha oyedwa, iphallet ephelele yokuphakama, ukunciphisa izindleko zokuhamba, ukugoqa, ama-pallets amabili okuphakama, ipallet yesidina, isusa ungqimba ophakathi nendawo
Lokhu kudluliselwa kwepallet kusabalalisa ama-pallet angenalutho kwi-roller conveyor. Ukunciphisa isikhathi sokungenela kwesisebenzisi nokugwema amaloli we-pallet ekukhiqizeni.
Ungahlanganiswa kumishini yokupakisha ye-Delta ukuthola umugqa ozenzakalelayo ogcwele.
Umakwe ngaphansi: amaphallet, i-roller conveyor, iloli lepallet, isitsha sokuhluza, DPD250, imigqa ezenzakalelayo, isikhathi sokungenelela sopharetha, amaphallet angenalutho, EUR, I-CP1, ukuqondisa okuphelelwe, izithiyo zokuphepha, okuzenzakalelayo